Tue, Jul 17, 2018 | 01:45:47 NST
मन पर्ने अरु मान्छेका फेस हेर्न पाइने, आफ्नो बिग्रेको फेसलाई सिंगारपटार गरेर राख्न मिल्ने, पिसाब गरेकोदेखि हिसाब गरेकोसम्मका कुरा बढाईचढाई वयान गर्न पाइने, हाइ हेलो भन्दै मन पर्नेसँग मनका कुरा साट्न र मन नपरेकालाई तथानाम गाली गर्न पाइने भएकाले फेसबुकले सबैलाई भुलाएको छ ।
हातमा मोवाइल छ, साथमा कम्प्युटर । इन्टरनेट समेत भयो भने फेसबुक खुल्छ । फेसबुक खुलेपछि मान्छे त्यसै भुल्छ ।
फेसबुक चलाउने पनि कस्ता कस्ता । कोही कोही पुलिसले गुन्डा खोजे झैं सर्च गर्ने मात्र हुन्छन् । राम्रा राम्रा मान्छे को कहाँ छ भनेर धुईंपत्ताल खोज्ने, मन पर्ने बित्तिकै लाइक र कमेन्ट ठोक्ने । अनि अर्काथरी हुन्छन्, जहाँ गए पनि फेसबुक चलाइरहने, अपडेट गरिरहने । भात खाँदै, सुत्दै, उठ्दै, खोक्दै, हिँड्दै, भात पकाउँदै, अचार मोल्दै......। अझ चर्पीभित्र पसेर डाउनलोड गर्न बसिरहेको मान्छेले समेत आफू के गर्दैछु, त्यो पनि फेसबुकमा अपलोड गरौंला झैं गर्छ ।
आज बुढीसँग झगडा पर्यो, आज बुढासँग ठाकठुक भयो । यी मेरा बुढा, उनी मेरी बुढी । यी चाहिँ मेरी गर्लफ्रेन्ड, उ मेरो व्वाईफ्रेन्ड । हरेकलाई चिनाइरहेको हुन्छ । लभ परेको, डेट गएको, भेट भएको सबै कुरा फोटो सहित फेसबुकमा अपडेट गर्न भ्याइसकेका हुन्छन् । धन्न अलि पहिले राजेश हमाल बाहेक अरु कसैले पनि हनिमुनको फोटो चाहिँ फेसबुकमा अपलोड गर्न भ्याइसकेका छैनन् ।
जहाँ पुगे पनि, जे गरे पनि, जसलाई भेटे पनि, जे भए पनि फेसबुकमा स्टाटस लेखिरहने, फोटो हालिरहने मान्छे लाइक र कमेन्टका सधैं भोका हुन्छन् । बरु उनीहरुलाई पेटभरी भात र खाजा चाहिँदैन । तर लाइक र कमेन्ट भने आँखाभरी चाहिन्छ । कुन स्टाटसमा कति लाइक र कमेन्ट आयो भनेर उनीहरु हिसाब गरेर बसिरहन्छ् । त्यही लाइक र कमेन्ट कमाउनकै लागि फेसबुकमा स्टाटस अपडेट र फोटो अपलोड गरेजस्तो ।
अझ फेसबुक चलाउनेलाई लाइक कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि पत्तो छैन । लाइक भनेको मन पर्यो । कसैले फेसकुमा लेखेको हुन्छ–तनावमा, फलानोको मृत्यु भयो, फलानो साह्रै बिरामी भयो, उसलाई साह्रै आपत पर्यो ।
दुःख, पीर र चिन्तामा भएको मान्छे त फेसबुक चलाउनुको सट्टा चुप लागेर झोक्राएर पो बस्नुपर्ने हो । तर आफू फेसबुक चलाउन नसक्नेगरी दुःखमा डुबेको छु भन्ने कुरा आफूलाई मात्र थाहा भएर त भएन नि ! त्यसैले अरुलाई थाहा दिन फेसबुकमा लेख्नुपर्यो । अनि उसको स्टाटस अर्कोले फेसबुकमा हेर्छ । उसलाई थाहा छ कि सकेसम्म कमेन्ट गर्नुपर्छ, नभए लाइक मात्रै भएपनि ठोक्नुपर्छ, नत्र उ रिसाउँछ । त्यसैले स्टाटसमा के लेखेको छ भनेर राम्रोसँग पनि पढ्दैन । स्टाटस देख्ने बित्तिकै लाइक ठोक्छ । मान्छे मर्यो भन्दा पनि मन पर्यो, बिरामी भयो भन्दा पनि मन पर्यो, आपदमा छु भन्दा पनि मन पर्यो, तनावमा छु भन्दा पनि मन पर्यो । के मा मात्र मन पराउनु !
कतिपयको स्टाटस र फोटो हेर्दा लाग्छ, उनीहरुले फेसबुकमा फोटो राख्नकै लागि बच्चा जन्माएका हुन् । फेसबुकमा राख्नकै लागि विवाह गरेका हुन् । अझ कतिपयले गाउँ जाँदा हलो जोतेको, भारी बोकेको, भात पकाएको, भाँडा माझेको मोडलिङ गरेर पनि फोटो खिचाउँछन् र फेसबुकमा राख्छन् । हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरुको पालामा फेसबुक भएको भए गोठालोमा दोहोरी खेलेको, सुन्तला चोरेर खाएको, खेतमा पानी लाउन गएको, मेलापात र जात्रामात्रा गएको फोटो फेसबुकमा कति राख्नुहुन्थ्यो होला । अनि अहिले पनि हामी त्यो फोटो हेरेर कति लाइक ठोक्थ्यौं होला ।
कतिपय यस्ता पनि छन्, जो लौन मलाई लाइक गर, मलाइ एड गर, उसलाई भोट गर, यसलाई भेट गर, मलाइ हेर, मलाई पछ्याउ भनेर इन्भाइट पनि गर्छन् । अरुलाई उ मन पर्छ पर्दैन भन्ने पत्तो हुँदैन, तैपनि उ मलाई मन पराउ न भनेर इन्भाइट गरिरहेको हुन्छ । यस्तालाई ठीक पार्न फेसबुकमा केही बटन थाप्नुपर्यो । लाइक गर्न या मन पराउन मात्र पाइने बटन छ । खै अनलाइक गर्न या मन पराउँदिन भन्ने बटन ? फेसबुकमा धेरैको स्टाटस र फोटो त मन नपर्ने खालको पनि हुन्छ । यस्तलाई त अनलाइक भन्न, मन परेन भन्न पाइयोस् न !
फेसबुक नचलाउने त कुनै पनि प्रदेशमा नपर्ने नागरिक जस्तो । भर्खर स्कुल जान थालेको नाति गाउँमा गएर बुढा हजुरबा हजुरआमालाई भन्छ–मलाई फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुस् न म कन्फर्म गरेर बेलाबेला च्याट गरौंला । बिचरा चाउरिएको फेस झनै झनै चाउरिनेगरी हजुरबा हजुरआमा ट्वाँ ।
पहिले पहिले कसैलाई खबर पठाउनुपर्दा, प्रेमिकालाई फकाउनुपर्दा पानाभरी लेखेर चिठी कोर्नुपथ्र्यो । टेलिफोन गर्नुपथ्र्यो । चिठी त हराइसक्यो नै । फोनमा भन्दा पनि फेसबुकको च्याटमै कुरा गर्ने बानी धेरै भैसकेको छ । च्याटमा कुरा गर्दा केही शब्द नै दुब्लाएर सकिनै लागिसके । अंग्रेजीमा हेलो हाउ आर यू भन्नुपर्ने ठाउँमा च्याटमा कुरा गर्दा हे यू अरे । आइ लभ यु को ठाउँमा आइ एल यू, १२३ अरे । ह्वाट अ म्यान अरे । प्लिज नभनेर पिएलजेड अरे । थ्याँक यू लाई टीक्यू रे । वेलकमलाई डब्लुसी रे । फेसबुकले त शब्द भण्डार नै खाली गराउने हो कि भन्ने डर पो भैसक्यो त ।
विद्यार्थीले त हिजोआज कोर्सबुक नै हेर्न छाडे । फेसबुक मात्र हेरेर दिन बिताउने भए । भर्खर जन्मेको केटाकेटीलाई पनि फेसबुक नै चलाउनुपर्ने । जन्मँदा जन्मँदै उसले आफ्नो स्टाटसमा म धर्तीमा...भनेर स्टाटस लेख्ला कि भन्ने डर । अनि मर्नै लागेको मान्छेले पनि अब तपाईंको अन्तिम ईच्छा के छ भन्दा खै फेसबुकमा मैले धर्ती छाडें भनेर लेख्न पर्यो भनेर मोवाइल या ल्याटप माग्ला भन्ने डर । अनि मैले यसो गरें, मैले उसो गरें भनेर स्टाटस लेखेजस्तै म मरें, म स्वर्ग हिँडे, आहा क्या रमाइलो स्वर्ग, कस्तो घिनलाग्दो नर्क...भनेर लाइभ अपडेट गर्ने दिन पनि आउने पो हो कि त !